Mmemme iji gbanwee foto ka ọ bụrụ vidiyo - VidaBytes | LifeBytes
Mmemme iji gbanwee foto ka ọ bụrụ vidiyo
Iris Gamen | 13/06/2022 22:31 | Mmemme
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe foto gị ka ọ bụrụ vidiyo iji kwado ọrụ dijitalụ gị, ị nọ n'ebe kwesịrị ekwesị. Anyị ga-akọwapụta ụfọdụ mmemme kacha mma n'efu na akwụ ụgwọ. Ị ga-amụta ngwá ọrụ kachasị mma iji nye foto gị ntụgharị ogo 360, na-agbakwụnye mmepụta ihe na ihe ọchị.
Ma vidiyo na onyonyo eserese bụ ihe abụọ pụrụ iche, ebe ọ bụ na n'ime obere oge ha na-ebuga ndị na-ege anyị ntị ozi n'ụzọ ziri ezi. Usoro nke ịtụgharị foto ka ọ bụrụ vidiyo, Ọ nwere ike bụrụ ihe ịma aka nye ọtụtụ n'ime gị ma ọ bụrụ na ị naghị eji ngwaọrụ ndị akọwapụtara maka ya.
Ọdịnaya anya ma na ndụ anyị onwe anyị, na iji netwọk mmekọrịta, na n'ebe ọrụ, dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ọ ga-emetụta ndị na-ege ntị dị iche iche nwere ike ịhụ anyị. Ọ bụ anyị dị ka ndị na-emepụta ihe, onye Anyị ga-emetụta ndị na-ege ntị na-eji ihe ndị na-eme ka anyị pụta ìhè na ndị ọzọ.
1 Ngwa kacha mma iji tọghata foto ka ọ bụrụ vidiyo
1.1 Adobe Spark Video ma ọ bụ Adobe Express
1.2 Pdị Typito
Ngwa kacha mma iji tọghata foto ka ọ bụrụ vidiyo
Na ngalaba a, ị ga-ahụ a obere nhọrọ nke ihe maka anyị bụ ụfọdụ mmemme kachasị mma iji tọghata foto na vidiyo na ahịa. Ha abụghị ndị kasị mma n'ihi na ha interface imewe, kamakwa n'ihi na ha otutu ọrụ na nhọrọ nke na-arụ ọrụ na nweta a n'ihi nke kacha mma mma.
Adobe Spark Video ma ọ bụ Adobe Express
Dị ka anyị niile maara, a maara ngwugwu Adobe n'etiti ndị ọkachamara na ndị hụrụ ụwa n'anya nke eserese, nke ị nwere ike ịmepụta akara ngosi, ibe weebụ, nhazi nhazi, wdg.
Otu n'ime ngwaọrụ enwere ike ịchọta bụ Adobe Spark Video, a ngwá ọrụ dị nnọọ mfe iji nke ị nwere ike ịgbanwe foto gị ngwa ngwa ka ọ bụrụ vidiyo. Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịhazi vidiyo site n'ịgbakwunye ederede, gbanwee oge ngụgharị, ịhọrọ nhazi omenala, wdg.
Just ga-eme bulite onyonyo gị ma tinye ya na slide, hazie ọdịnaya niile, ma multimedia na ederede. Ihe na-esote ga-abụ ịhọrọ isiokwu maka ihe nkiri slide ma megharịa ya na ụdị gị. Hazie oge, hazie vidiyo ma emechaa.
ngwá ọrụ ọzọ, Onye okike vidiyo nke nwere ike inyere ọtụtụ n'ime gị aka ịnakọta foto gị niile nke oge ọkacha mmasị gị, n'otu oge. Ihe omume a maara nke ọma n'etiti ndị ọrụ, n'ime ya, a na-ahapụ ya ka ịtinye egwu, ọtụtụ ihe oyiyi n'otu oge, vidiyo ndị ọzọ, wdg.
Ị ga-emepe mmemme, ma buo foto nke ịchọrọ. Na-esote, ị ga-ahọrọ template ma ọ bụ slide iji tinye ihe oyiyi ndị a. Hazie ihe dị iche iche ka amasị gị, dezie, akuku, gbanwee nha, wdg.. Ozugbo nke a, tinye ederede ma ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mkpa wee budata.
Ọtụtụ ewu ewu, maka ndị ahụ ndị ọrụ na-achọ iji tọghata onyonyo ha ka ọ bụrụ vidiyo, ma nwee ike iji ederede mee ya. Nke a online ngwá ọrụ na-enye gị ohere mfe bulite oyiyi na tọghata ha n'ime video na ebumnuche nke impacting ọha. Ị nwere ike itinye ederede, ndebiri omenala, mmetụta, ntụgharị, InVideo bụ ngwá ọrụ zuru oke.
Naanị ị ga-abanye, họrọ n'ime ihe karịrị puku ise dị ndebiri, bulite ihe oyiyi na ịchọrọ ịtụgharị, gbakwunye ihe dị iche iche na ntụgharị na, n'ikpeazụ, budata faịlụ ahụ na mkpebi achọrọ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata foto ka video nnọọ mfe, a online ngwá ọrụ na ya dị iche iche ọrụ ga-enyere gị aka. Site na interface dị mfe, Animoto bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na mmemme nke na-ekwesịghị ịdị na-efu maka ọtụtụ ndị ọkachamara na mpaghara imewe na n'ime ụwa multimedia.. Animoto nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na ngwa ederede iji were okike gị gaa n'ọkwa ọzọ.
Bulite onyonyo wee họrọ ndebiri nke dabara maka mkpa gị. Mgbe ahụ, dozie ma hazie foto ndị a, kụọ ha, bugharịa ha, tinye ihe nzacha, wdg. Mee ka ihe oyiyi ọ bụla nwee ụdị pụrụ iche. Tinye ederede, ọ bụrụ na ị chere na ọ dị mkpa, ma họrọ ụdị nke na-eme ka ihe mejupụtara gị pụta ìhè.
Mmemme edezi vidiyo nwere ọrụ ndezi dị iche iche dị ka igbutu, nkerisi, ịgbakwunye egwu, imekọrịta ihe, wdg. Ngwá ọrụ a, mara na ọ nwere naanị ụbọchị isii n'efu ikpe. N'ime ndị na-eji ụdị ngwá ọrụ a, VideoPad enwetala ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya n'ihi njikwa ya dị mfe yana nhọrọ dịgasị iche iche.
Ọ na-enye gị ohere nke na-arụ ọrụ na ihe karịrị 50 dị iche iche mgbanwe na formats, nke ị nwere ike bulite ihe okike gị na nyiwe dị ka YouTube. Dabere na ọnụọgụ na ịdị arọ nke faịlụ ndị ị na-arụ ọrụ, ọ nwere ike belata oge ụfọdụ.
Nanị Site na ịpị ole na ole, ị ga-enwe ike ịme vidiyo nke onyonyo n'ịntanetị n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na ịhọrọ ngwá ọrụ a, ị ga-enwe ike ịmepụta vidiyo n'ụzọ dị mfe, na-ebugote foto gị, dezie ha, hazie ha na ịmegharị ha.
Usoro ị ga-agbaso iji nweta nsonaazụ ọkachamara bụ ndị a; pịa nhọrọ iji mepụta vidiyo ọhụrụ wee họrọ ntọala ndị na-egbo mkpa gị. Gaa na-agbakwunye ihe nkiri wee malite bulite onyonyo gị. Megharịa faịlụ ndị ahụ na ntọala dị. Họrọ nhọrọ mmetụta onyonyo wee malite iweta foto gị na ndụ.
Dịka anyị siri hụ na ngwaọrụ ndị ọzọ, Clideo bụ ihe ọzọ ị nwere ike iji tọghata foto gị ka ọ bụrụ vidiyo. Ọ bụrụ na ijide mmemme a, ịnwere ike ịgbakwunye faịlụ dị iche iche n'otu oge, ọ bụghị naanị onyonyo, kamakwa GIF na vidiyo. Ọ bụ ikpo okwu n'ịntanetị kpamkpam, nke enweghị ngwa mgbakwunye ọzọ dị mkpa.
Bulite onyonyo ọkacha mmasị gị, mezie faịlụ ndị a n'usoro, dezie ha ka ịchọrọ, ị nwere ike gbutuo ya, bugharịa ya, dezie ha, wdg. Tinye obere vidiyo ọdịyo kachasị amasị gị, dozie ya na Ọ bụrụ na nsonaazụ ahụ mee ka ị kwenye, egbula oge nke abụọ wee gaba n'ihu budata.
Ọ dị nnọọ mfe, usoro nke converting foto n'ime videos na ndị a omume na anyị kwuru. Naanị ị ga-edobe anya na ihe onyonyo ị ga-arụ ọrụ wee mepụta vidiyo dị egwu. Cheta na ọ dị mkpa ka ị mara ngwá ọrụ kacha mma maka mkpa gị na nke ọ na-adị gị mma mgbe ị na-arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndụ LifeBytes » Mmemme » Mmemme iji gbanwee foto ka ọ bụrụ vidiyo
Esi emeghe faịlụ CBR
Kedu ka m ga-esi nwetaghachi ozi Telegram